Baby ịsa ịkpọ òkù: Olee ka Pụrụ iche Baby ịsa ịkpọ òkù
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee Ahaziri Baby ịsa ịkpọ òkù
Baby ịsa bụ a ememe ọzọ asọpụrụ ọhụrụ mụrụ nwa ma ọ bụ nwa na-abịa. Ọ bụ ọsọ na n'ebe ọdịda anyanwụ mba dị ka USA, Canada, UK, na ọbụna India. Na-emekarị, naanị ndị inyom ga-ịga nwa ịsa ọzọ. Ọ dịghị onye na-kpọrọ. Ya mere, dị ka a inyom ọzọ, nwa ịsa nwere ike nnọọ ahaziri na pụrụ iche, na ihe nile amalite site nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù.
Baby ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù na-emekarị mere si kaadị ndebiri, na ịke na-adabere na omenala na-emekarị, oge, onye nnabata àgwà na ọbụna ndị na-kpọrọ. Baby ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa nwere ike ịbụ ma ukporo ma ọ bụ na-akpa ọchị. Ọ bụrụ na ndị sụgharịa daunts gị, egbula agụ nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa ina n'ike mmụọ nsọ, ma ọ bụ ịgbanwe ya ka ona gị mkpa.
Baby ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Baby ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa ike ịbụ ihe ọzọ ahaziri karịa imewe onwe ya. Ọ bụrụ na ị na-eche ka o sie ike ịhazi okwu ma ọ bụ na ị na-adịghị mma na sụgharịa, dị nnọọ ezo n'okpuru nwa ịsa òkù sụgharịa ihe atụ, na-agbanwe ma ọ bụ ikpokọta ha ka ha na gị onwe gị otu. Ma nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa maka nwa nwoke, nwa nwanyị na nwa ejima na-gụnyere.
N'ihi na Baby Boy:
Mgbe a mụọ nwatakịrị,
otú ahụ bụ a na nne ya.
Ị na-òkù a
Baby ịsa maka Jacky Thomas
RSVP site May 20
ka Carla 111-000-5555 N'ihi Baby Girl: Ka n'ụba ya ịhụnanya Ị na-ji obi ụtọ na-kpọrọ a Baby ịsa asọpụrụ Megan Smith na Sunday, March 10th na 5 pm 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia Mma naanị Carla na 111 -2222 N'ihi Ejima Baby: Abụọ tent nke aka abụọ tent nke anya! ejima ndị dị otú ahụ a na-atọ ụtọ mberede! Biko sonyere anyị maka a Ejima Baby ịsa asọpụrụ Jacky na Berry Givens Saturday, 24th June na 11:00 am Clyde si Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 8332 Leesburg Pike Vienna , Virginia
Ugbu a, ị ga-achọ ime ka a nwa ịsa òkù na i nwere. Ebe a DVD ngosi mmịfe Nrụpụta ukwuu tụrụ aro. Ịnwere ike ibudata a software na-agbalị ya!